खुमबहादुर खड्काले ‘सुराकी’ भन्दै प्रदिप गिरिलाइ किन कुटे ?::RATONEWS
खुमबहादुर खड्काले ‘सुराकी’ भन्दै प्रदिप गिरिलाइ किन कुटे ?
नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक र शालिन नेताको छवी बनाएका प्रदीप गिरी धेरैको बौद्धिक खुराक र प्रेरणाको श्रोत समेत मानिन्छन् । युवा उमेरमै आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभावले नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन अध्यक्ष बिपी कोइरालालाई समेत प्रभावित पार्ने गिरीको आजपनि नेपाली राजनीतिमा विशेष छवी कायमै छ । तर तिनै गिरीलाई नेपाली कांग्रेसकै नेता खुमबहादुर खड्काले ‘सुराकी’ भन्दै कुटेको तथ्य भने धेरैलाई थाहा छैन । एसकाठमान्डुमा फिचर छ !
किन कुटे खुमबहादुले प्रदिप गिरीलाई ?
घटना २०३१ सालको हो । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष विपी कोइराला लगायतका नेताहरु भारतमा निर्वासित जीवन विताइरहेका थिए । देशमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको जगजगी थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको कार्यदिशा अख्तियार गरेको थियो । नेपालको पञ्चायती व्यवस्थालाई बन्दुकको बलमा मात्र ढाल्न सकिने कांग्रेसको निश्कर्ष र विश्वास थियो । राजपरिवारकै कुनै सदस्यलाई फौजी आक्रमण गर्न सकेको खण्डमा नेपालको पञ्चायती व्यवस्थालाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्कर्षसहित कांग्रेसले ठूलै फौजी योजना तयार पा¥यो । योजना अनुसार नेपाली कांग्रेसका केही जोसीला युवाहरुलाई बम दिएर राजपरिवारका कुनै सदस्यमाथि हमला गर्नुपर्ने थियो । उक्त योजनाका प्रमुख योजनाकार गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । बिपीको सुझावमा गिरिजाले उक्त महत्वाकांक्षी फौजी हमलाका लागि कांग्रेसका चारजना युवाहरु तयार पारे । उनले छानेका विश्वासिला युवाहरुमा ओखलढुंगाका लिला दाहाल, ठगीराज दाहाल, गोकर्ण बहादुर कार्की र खगेन्द्र दाहाल थिए ।
फौजी योजनाका लागि छानिएका उल्लेखित चारजना युवाहरुलाई बनारसमा नेपाली कांग्रेसका नेता एलबी गुरुङले रिभल्वर चलाउन र ग्रिनेड पड्काउन तालिम दिए । तालिम दिने गुरुङ स्वयमलाई समेत गिरिजाले आफ्नो योजनका बारेमा केही बताएका थिएनन् । तालिम लिने युवाहरु समेत गिरीजाको योजना बारे बेखबर थिए । एकदिन अकस्मात गिरीजाप्रसाद कोइराला र नोना कोइरालाले ४ तकीयाका अस्तर, ४ बेडिङ्ग होेल्डर र ३६ नं का ३ वटा ग्रिनेड लिएर प्रदिप गिरी बस्ने कोठामा पुगे । प्रदिप गिरीको डेरामा उनी र उनकी बैनी मञ्जुला गिरी बस्थे ।
नोना, गिरिजा र मञ्जुलाले ग्रिनेड बमलाई तकियाको खोलमा राखि सिलाए । त्यही बेला गिरिजाले अत्यन्त गोप्य रुपमा बमहरु काठमाडौं लगेर पड्काउने भेद खोले । कोइरालाको योजनाका बारेमा प्रदिप गिरी, मञ्जुला गिरी र नरबहादुर कार्कीलाई मात्र जानकारी थियो । गोप्य रुपमा बनेको योजना अनुसार ग्रिनेड हालिएका तकिया बोकेर चारैजना युवाहरु बनारसबाट काठमाडौं हिँडे । तर कसैले चारजना युवाहरु बम लिएर काठमाडौं पस्दैछन् भन्ने गोप्य सुचना गृहमन्त्रालयलाई अवगत गराइसकेको थियो ।
बम बोक्ने चारजना युवाहरु चढेको बसलाई जनकपुर बाटै सरकारका सिआइडीहरुले पिछा गर्न थाले । दुईवटा बसमा चढेर बम लिएर आउने युवालाई जनकपुरबाट पिछा गर्ने सिआइडी र सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीले काठमाडौंको पुरानो बसपार्कबाट पक्राउ गरे । पक्राउ परेको केहि समयपछाडि नै उनीहरुलाई नख्खुको ओरालोमा मध्यराती गोली हानी मारियो ।
अत्यन्त महत्वपुर्ण योजना असफल भएपछि यो प्रकरणले कांग्रेसभित्र खैलाबैला मच्चियो । गिरिजा र नोना कोइराला बाहेक योजनाका बारेमा गिरी, उनकी बैनी मञ्जुला गिरी र नरबहादुर कार्कीलाई मात्र जानकारी थियो । कांग्रेसले गरेका आन्तरिक अनुसन्धानले बम प्रकरणबारे गिरी र नरबहादुर कार्कीमाथि शंका गरेको थियो । सो प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै प्रदिप गिरीलाई पार्टीले कारबाही गरेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता बालकृष्ण दाहालले आफ्नो पुस्तक ‘सहिद लिला यशोदा स्मृति ग्रन्थ’ मा उल्लेख गरेका छन्
नख्खु ओरालोमा मारिने मध्ये एक लिला दाहालका छोरा समेत रहेका बालकृष्णले गिरीमाथि कारबाही गरेको रहस्य ‘सहिद लिला यशोदा स्मृति ग्रन्थ’ मा खुलासा गरेका हुन् । दरवारका सदस्यमाथी बम हमला गर्ने कांग्रेसको योजना नेता गिरीले दरवारमा सुराकी गरेको आरोप लाग्यो । त्यही आरोपमा कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले गिरी र नरबहादुर कार्कीलाई कुटपिट गरेका थिए । ‘उनीहरुको ग्रिनेड ल्याउने योजनालाई काठमाडौंसम्म पु¥याउन प्रदिप गिरी, मञ्जुला गिरी र नरबहादुर कार्कीमाथि धेरैले शंका गरेका छन् । प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस पार्टीले केहि दिनपछि प्रदिप गिरीमाथि कारबाही समेत गरेको थियो’, दाहालले लेखेका छन्, ‘२०३१ सालको ओखलढुंगा काण्ड असफल गराउन प्रदिप गिरी, नरबहादुर कार्की लगायतको हात रहेको भन्दै बनारसमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नेता खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गएको एउटा समुहले उनीहरुमाथि कुटपिट समेत गरेको थियो ।’
सोही घटना र त्यसपछिका एकाध घटनाको असफलताका कारण नेपाली कांग्रेस सशस्त्र क्रान्तिको बाटोबाट पछाडी हट्यो । नेपालमा सशस्त्र युद्ध सफल नहुने निश्कर्ष सहित बिपी ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लिएर काठमाडौं आए । नेपाली कांग्रेसले शान्तिपुर्ण राजनीतिको बाटो अख्तियार ग¥यो । २०३१ सालको काण्डपछि कुनैबेला बिपीका समेत प्रिय रहेका गिरीलाई नेपाली कांग्रेसले आशंकाको दृष्टिले हेरिरह्यो । बम काण्डको असफलतापछि गिरीको कोइराला परिवारसंगको सम्बन्ध सँधै चिसो रहिरह्यो । आफुमाथि पार्टी भित्रैबाट चारजना युवाको ज्यान जाने गरि भुमिका खेलेको आरोप लागिरहँदा पनि गिरीले कहिल्यै उक्त आरोपको खण्डन भने गरेनन् ।